Xusuusta geisha: yaa qoray, maxaa ku saabsan | Suugaanta hadda jirta
Buug xusuus ah geisha
El Xusuusta buug geisha ah waxay ahayd guul aad u weyn markii qoraagu daabacay, ilaa heer ay ka sii mid ahaato buugaagta ugu iibinta badan muddo labo sano ah, buugaag aan badnayn oo abid la qabtay.
Inbadan waxay ahaayeen kuwa aqriyay oo layaabay qaar kamid ah dhaqamada gabdhaha ladhacay iyo sida ay ugu shaqeeyeen xirfadaas, ilaa heer laga dhigo mid muran badan, gaar ahaan qofka ay ugu tiirsanaayeen inuu shaqada qoro. Laakiin maxaad ka ogtahay buugga Xusuusta Geisha? Marka xigta waxaan ka hadli doonaa isaga iyo wax kasta oo aad ka heli karto.
1 Muxuu ku saabsan yahay buugga xusuusta Geisha?
2 Waa maxay jilayaasha ku jira Xusuusta Geisha
3 Sidee buu muranku uga jiray buugga
4 Ma jiraan buugaag intaa ka sii dambeeya?
5 La qabsashada filimka ee Xusuusta Geisha
Muxuu ku saabsan yahay buugga xusuusta Geisha?
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaad ka ogaato buugga Xusuusta Geisha waa inuu yahay sheeko taariikhi ah. Dhexdeeda dhacdooyinka dhabta ah waa laga sheekeeyaa, laakiin isla markaa khayaaliga ah. Waana taas qoraaga, Arthur Golden, wuxuu baaray muddo ka badan shan sano wareysanaya geisha kala duwan, qaar ka mid ah ayaa la siiyay dukumiinti ka badan kuwa kale. Sidaa darteed, wuxuu qariyey sheeko khiyaali ah oo ku saleysan xaalado si dhab ah u noqon kara, isaga oo dejinaya Kyoto ka hor inta uusan qarxin Dagaalkii Labaad ee Adduunka.
Buug-gacmeedka qoraaga wuxuu na barayaa Chiyo, gabar quruxdeeda indhaheeda ku jirta. Waxa uu la nool yahay qoyskiisa magaalada Yoroido oo ay walaalo yihiin. Dhibaatadu waxay tahay, marka hooyadu bukooto, aabuhu ma daryeeli karo gabdhaha, wuxuuna ku dambeeyaa inuu ka iibiyo ganacsade maxalli ah.
Chiyo waxay rumeysan tahay in la korsaday, laakiin ugu dhakhsaha badan waxay ogaataa inaysan ahayn oo la geeyay guri geisha ah oo ku yaal Kyoto, iyada oo ay kormeerayaan Hooyada. Halkaas, wuxuu ku bilaabmaa adeege raac amarada Hatsumomo, markuu helona wuxuu aadaa iskuulka geisha.
Si kastaba ha noqotee, Hatsumomo wuxuu u arkaa inay tahay mid la tartameysa, wuxuuna isku dayaa inuu si kasta uga takhaluso si aysan u noqon geisha. Laakiin qallooca qaddarka ayaa Chiyo ka dhigtay inuu noqdo tababaraha Mameha, Gion ugu guusha badan, Gion wuxuu u diyaariyaa inay noqoto geisha ugu fiican. Si tan loo sameeyo, wuxuu ku bilaabayaa inuu magaciisa u beddelo Sayuri.
Ma doonayo inaan wax badan ka sheegno shirqoolka, laakiin waa inaad maanka ku haysaa in sheekada Chiyo ay aad ugu adag tahay marinnada qaar waxayna taasi ka dhigeysaa akhristaha inuu waqti xun la kulmo marka ay la kulmayaan.
Waa maxay jilayaasha ku jira Xusuusta Geisha
In kasta oo ay jirto in buugga Xusuusta Geisha waxaa looga sheekeeyaa sidii xusuus qor, runtu waxay tahay inay jiraan jilayaal kala duwan oo fiiro gaar ah loo yeesho. Kuwa ugu waaweyn waa:
Chiyo. Iyadu waa halyeeyga aan muran ka taagnayn, dabeecad loo arko inay ku kobcayso taariikhda.
Hatsumomo. Chiyo oo la tartamayay. Aad ayey u qurux badan tahay oo aad u guuleysataa, laakiin nacaybkeeda, masayrkeeda iyo kibirkeeda ayaa ka indho tiraya heer ay gaarto qorshe kasta oo looga hortago in qofna ka sarreeyo.
Bocorka. Iyadu waa saaxiibada koowaad ee Chiyo markay timaado guriga geisha. Waxay leedahay guul weyn muddo gaaban, oo ay caawineyso Hatsumomo si ay uga fogaato Chiyo.
Mameha. Iyadu waa geisha kale, tan ugu fiican degmada, sidoo kale waxay leedahay madax-bannaanideeda iyada oo haysata danjire bixisa kharashkeeda (nin iyada iska bixiya).
Madaxweyne. Magaciisu waa Iwamura Ken wuxuuna dhowr jeer la kulmay Chiyo. Iyadu waa sababta ay ku noqotay geisha.
General Tottori. Waa tii ugu horreysay ee Chiyo (Sayuri).
Sidee buu muranku uga jiray buugga
Xusuusta Geisha waa buug muujinaya suuxdin la'aan, nolosha gabadha laga bilaabo waqtiga reerku "iibiyo" ilaa ay geisha ka noqoto. Si kastaba ha noqotee, tani maahan gebi ahaanba sheeko, laakiin dhab ahaantii waxay ku saleysan tahay waaya-aragnimada ay dumarka qaarkood u sheegeen qoraaga, Arthur Golden. Mid ka mid ah, Mineko Iwasaki, ayaa ahayd qofka ugu caansan uguna qosolka badan, sababtaas darteed, ka dib markii la daabacay, way cambaareysay maxaa yeelay waxay jabisay qandaraaska qoraaga (sida uu qabo Iwasaki, wuxuu u dammaanad qaaday magaceeda oo aan la garanayn, maxaa yeelay waxaa jira koodh aamusnaan ka dhex jirta geishada oo jabinta waxay ahayd dambi weyn).
Sidoo kale, ereyadii Iwasaki, buugga Memoirs of a Geisha wuxuu si maldahan u sheegay in geisha ay yihiin kaliya dhillayaasha heerka sare, marka runti may ahayn. Sidoo kale run ma ahayn in waalidiinta Iwasaki ay ka iibiyeen geisha ama in bikranimadeeda laga xaraashay iibiyaha ugu sareeya.
Iska horimaadkan waxaa lagu xaliyay heshiis aan garsoor ahayn oo u dhexeeya qoraaga iyo geisha qaddar lacageed oo aan la shaacin.
Ma jiraan buugaag intaa ka sii dambeeya?
Waxa jira buugaag la mid ah Xusuusta Geisha, laakiin maaha qayb labaad oo ka mid ah tan. Haddaba, dacwadii ay qabatay Mineko Iwasaki kadib, waxay daabacday buug, taariikh nololeed taas oo ay uga sheekaysay sheekada dhabta ah ee sida geisha ahayd. Cinwaankiisu wuxuu ahaa Nolosha Geisha waxaana la daabacay 2004.
La qabsashada filimka ee Xusuusta Geisha
Waa inaad ogaataa in buuggu, ka dib guushii uu ka gaadhay iibka, uu ahaa hadafka shirkado badan oo wax soo saar oo doonayay inay u qaadaan shaashadda weyn. Wayna ku guuleysteen.
La qabsashada buugga, oo magaciisu isku mid ahaa, ka muuqatay qayb ka mid ah wixii buugga loogu sheegay, in kasta oo aaney dhammaan wada ahayn, iyo bedelida jajabyada qaar iyadoo la tixraacayo sheekada dhabta ah. Tusaale ahaan, mid ka mid ah muuqaalada ugu xiisaha badan filimka ayaa ku lug leh dabka, marka qolka Sayuri uu dab qabsado ka dib markii ay la murmeen Hatsumomo oo ay iyada ku dhacday ficil tan ka dib. Buugga, dayrta ayaa gaabis ah, oo kaliya dhammaadka Mameha iyo Sayuri ayaa siiya riixitaanka ugu dambeeya, iyada oo u dhigaysa inay tahay dhillo (filimka iyada uun baa la waayey).
Si kastaba ha noqotee, sidoo kale waxay ahayd mid guuleysatay oo buugga ka dhigtay iibiyaha ugu sarreeya mar labaad in muddo ah.
Sababtaas awgeed, waxaan mar walba kugula talineynaa akhrinta buugga maxaa yeelay wuxuu siinayaa aragti, mararka qaar gebi ahaanba ka duwan wixii lagu arkay telefishanka (ama shineemooyinka).
Ma akhriday Xusuusta buugga Geisha? Sideed u aragtaa arrintaas? Waxaan jeclaan lahayn inaan maqalno aragtidaada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Suugaanta hadda jirta » Suugaanta » Buugaag » Buug xusuus ah geisha
Claudio Rodríguez. Sannad-guurada dhimashadiisa. Gabayo
Maalinta cirka soo dhacdo